हरेक पर्यटक, एक शिकारी वा च्याउ टिप्ने आधारभूत उपकरण कि, एक अपरिचित क्षेत्र हराएको छैन प्राप्त एक कम्पास मद्दत गर्छ लागि। तर सबै यो तपाईं संग, जंगल मा जा छ। सूर्य, ताराहरू, विभिन्न प्राकृतिक स्थलहरू को मद्दतले - यो नेभिगेट गर्न अन्य तरिका थाहा त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ।
ओरियन्टियरिङ के हो
यात्रा वा मशरूम लागि हिड्ने गर्दा विभिन्न परिस्थितिहरु उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बाक्लो, बाक्लो जंगल हराएको प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र खुला steppe मा। कुनै पनि मामला मा, आफ्नो बाटो घर पत्ता लगाएर, तपाईं ठीक वरपरको क्षेत्र मा नेभिगेट गर्न आवश्यक छ। यो अर्थ - तिनीहरूलाई आन्दोलन को दिशा बादल मडारिरहेको, निकटतम बस्तियों आफ्नो स्थिति सापेक्ष छेउमा निर्धारण र चयन गर्न सक्षम हुन। ज्ञान को आधारभूत स्कूल पाठ्यक्रम सम्मिलित।
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण र पूर्व - भूगोल मा अभिमुखीकरण लागि चार मुख्य निर्देशन प्रतिनिधित्व गर्छ। यसको अस्तित्व को वर्ष, मानवता संसारको अठोट लागि विभिन्न विधि को एक ठूलो संख्या विकसित भएको छ। पुरातन समयमा समेत मान्छे सूर्य द्वारा नेभिगेट गर्न कसरी आधारभूत सिद्धान्त थाह - सूर्यास्त को ठाउँ - easterly निर्देशन सूर्योदय र पश्चिम को स्थान संकेत गर्छ। सबै पुरातन नक्शा स्थिति निर्धारण गरिन्छ जो दक्षिण, गर्न उन्मुख यसको जेनिथ मा सूर्य को।
आज, आफूलाई एक कम्पास संग प्रस्तुत, यो धेरै सजिलो बादल मडारिरहेको को भाग पहिचान छ। यो उपकरण आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्षम थियो, जुन मार्ग निर्माण हुनेछ कुनै पनि निर्देशन आवश्यक छ।
सूर्य को अभिमुखीकरण
पत्ता जहाँ उत्तर र जहाँ तपाईँले थाहा छ भने र गर्न सक्छन् एक कम्पास बिना सूर्य को भू-भाग कसरी नेभिगेट गर्न दक्षिण। यो यसको Rising को सही ठाउँमा जान्नु र मा सेट गर्नेछ को केही समय वर्ष। यो सूर्य पूर्व मा rises र पश्चिम मा सेट कि गलत छ।
वास्तवमा, उत्तरी गोलार्द्ध मा, यो केवल मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 (विषुव दिन) छ। मा गर्मी बिहान सूर्य उत्तर-पूर्वी मा बादल मडारिरहेको देखिन्छ, यो उत्तर पश्चिमी र यसलाई दिउँसो छ दक्षिण सेट गर्छ। सुरु हुने मार्च 21 सबै दक्षिण - सूर्य सबै उत्तर र जाडो आउँदै (सेप्टेम्बर 23 पछि) संग rises।
सूर्य को अभिमुखीकरण र छाया
आकाश मा एक आकाशीय वस्तुको स्थान दिन भर फरक हुन्छ। दिउँसो घाम पश्चिम गर्न पूर्व देखि सार्दा सबै माथि छ। यो समयमा सबै आसपास वस्तुहरु सम्पूर्ण लागि निकटतम छाया डाली , डेलाईट घण्टा उत्तरका लागि निर्देशन संकेत। पेड देखि गिरने दिउँसो छाया को छोटो पक्षले प्रकाश को संकल्प - यो सूर्य गरेर जंगल मा नेभिगेट गर्न धेरै तरिका को छ।
कुनै नजिकका रूखहरू छ भने जहाँ उत्तर, तपाईं कुनै पनि छडी ठाडो जमीन मा छडी र कुन तरिका छाया निर्देशित छ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि पत्ता लगाउन।
दिन को अन्य समयमा यो विधि द्वारा बादल मडारिरहेको को भाग निर्धारण गर्न पनि सम्भव छ। लगभग 1 मीटर को जमीन छडी लम्बाइमा टाँसिएको, यो improvised गर्नुपर्छ उल्लेख मतलब जहाँ यसको छाया को समाप्त कुनै पनि ठाउँ। लगभग 15 मिनेट पछि, जब छाया चाल फेरि उनको स्नातक मनाउन। दोस्रो पहिलो चिन्ह देखि एक थप कदम लागि जारी गर्नुपर्छ जो एक सीधा लाइन, कोर्नुहोस्। अन्त्यमा - अब हामी बायाँ खुट्टा खण्डको शुरुवात, र सही छ भनेर फिर्ता छडी प्राप्त गर्न आवश्यक छ। दिशा मा तपाईं हेर्न र उत्तर हुनेछ। यो विधि को अनिश्चितता प्रारम्भिक बिहान र लेट साँझ घण्टामा सबैभन्दा ठूलो छ।
सूर्य र दिनको समय नेभिगेट गर्नुहोस् कसरी गर्न सक्नुहुन्छ
यो विधि, धेरै सरल छ यो स्वर्गीय शरीर बादल मडारिरहेको को एक निश्चित बिन्दुमा छ के समयमा थाहा suffices। खातामा वर्ष को समय लिन निश्चित हुनुहोस्। , 9-10 मा बिहान वरिपरि 6-7 बजे - -, 15-16 घण्टा मा दक्षिण मा - - उदाहरणका लागि, गर्मी मा सूर्य पूर्व छ दक्षिण-पूर्व, बारे 13 घण्टा दक्षिण पश्चिम, र 21 घण्टामा - उत्तर-पश्चिम।
घडी र सूर्य मा अभिमुखीकरण
सबैभन्दा साधारण घडी डायल मदत गर्न बादल मडारिरहेको को भाग थप ठीक परिभाषित गर्न। यस मामला मा डिजिटल प्रदर्शन उपयुक्त छैन। घडी हात सूर्य देख थियो भनेर घडी राखिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि, conceptually संख्या 1 आधा गर्न तीर माथि को कोण विभाजन रेखा रेखाङ्कन। यो लाइन को लडी दक्षिण कुरा हुनेछ। उत्तर, त्यसैले विपरीत पक्षमा हुनेछ। उत्तरी क्षेत्रमा परिणाम सही, दक्षिणी त्रुटि मा 20% हुन सक्छ हुनेछ मा।
त्यहाँ घडी र सूर्य मा नेभिगेट गर्न अर्को तरिका हो। को गर्मी मा सूर्य को आन्दोलन को गति प्रति घण्टा 15 डिग्री छ। हामी दिउँसो यसलाई दक्षिण छ भनेर विचार भने, 17 घण्टामा यसलाई 45 डिग्री (17-14) x15 मा पश्चिम मा बदलाव हुनेछ। यो एक सही कोण को आधा छ। यसलाई मानसिक बायाँ दूरी मापन गर्न मात्र रहन्छ - यो दक्षिण दिशा छ।
एक बादल दिन हुन बाहिर गरिएका घटना, तपाईं सूर्य सम्भव छैन द्वारा रूपमा निर्देशित, अन्य निर्देशन, जंगल मा उपलब्ध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सुझाव जहाँ उत्तर र दक्षिण जहाँ रूखहरू गर्न सक्छन्। Lichens सामान्यतया मश र बैरल को उत्तर पक्ष संग लेपित छन्। रूख को दक्षिण पक्षमा सूर्यका देखि चिस्यान चाँडै बाहिर dries, त्यसैले lichen बच्न कुनै मौका छ। साथै, लामो र बाक्लो दक्षिण पक्षमा एक रूखको हाँगा।
यो बादल मडारिरहेको र सामान्य कमिला बस्ने घर छेउमा निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। सामान्यतया यो रूख, टी को दक्षिण पक्षमा स्थित छ। गर्न। द छाया अन्यथा उहाँलाई गिर थियो। Ants पनि आवश्यक सूर्यका। साथै, उत्तर तर्फ steeper मा कमिला बस्ने घर को ढलान।
प्राकृतिक स्थलहरू बरु कुनै एक परेर भन्दा, संयोजन मा प्रयोग गरिनुपर्छ।
हामी ध्यान आसपास वस्तुहरु गर्न नजिकबाट हेर्न भने, र पनि सूर्य र कम्पास द्वारा नेभिगेट गर्न कसरी जान्न, जंगल मा कुनै पनि पदयात्रा आवश्यक राम्रो अन्त।
को civet खाने? Civet जंगली मा खाने?
कबूतर फोटो र नाम को प्रकार
Twardowski, "देश कमिला": सारांश र विश्लेषण
अर्थ "पीके-Merz।" प्रयोगको लागि निर्देशन
इतिहास Singleton व्हिस्की। व्हिस्की Singleton: समीक्षा
एउटा वेबसाइट सिर्जना गर्ने प्रक्रिया कसरी सुख गर्न? WYSIWYG सम्पादक HTML मद्दत गर्छ!
पुस्तक "एक प्रेम कसरी फर्कन? 49 सरल नियमहरू। " सल्लाह र निर्देशन मनोवैज्ञानिक: एक प्रेम कसरी फर्कन